Ithegi: q & a | Martech Zone
Ithegi: q & a
Abathengisi bedijithali baxhomekeke kulwakhiwo lwekhonkco njengesicwangciso-qhinga esibalulekileyo ekusebenzeni kweinjini yokukhangela (i-SEO) yokunyusa umgangatho wabo wephepha kwii-injini zeziphumo (ii-SERPs). Ngabathengisi abasebenzela ukufumana i-backlinks kunye nokuphucula ukugcwala kwesiza, ukuvelisa isikhokelo, kunye nokufezekisa ezinye iinjongo, bafundile ukubuyela kwiindlela ezininzi ezithandwayo kwibhokisi yezixhobo zabo. Yintoni i-Backlink? Ikhonkco elingasemva likhonkco elinokucofa ukusuka kwindawo enye ukuya kweyakho. Iinjini zokukhangela ezinje